ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.Hideo Watanabe နှင့်အဖွဲ့အား ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ လက်ခံတွေ့ဆုံ – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ H.E. Mr.Hideo Watanabe နှင့်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့က ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဌာနချုပ်ဧည့်ခန်းမဆောင်မှာ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာကျော်ကျော်ဌေး၊ ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်၊ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးရဲထွဋ်အောင်နှင့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနမှူး ဦးမြင့်ကိုကိုတုိ့က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ချစ်ကြည်ရေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နေမှုများ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
← စပိန်နိုင်ငံ အွန်လိုင်းတက္ကစီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေး၊နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအတွင်းရေးမှူး မအူပင်ခရိုင် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံ →
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် ကွင်းဆင်းမိတ်ဆက်
February 28, 2017 USDP 2016 Comments Off on အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် ကွင်းဆင်းမိတ်ဆက်
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လူငယ်ထုတွေ့ဆုံ
January 14, 2019 USDP 2016 Comments Off on ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ လူငယ်ထုတွေ့ဆုံ